Jupp Heynckes: “Waan Ka Fiicneen, Balse Real Madrid Iyo Taageerayaasheeda Waa Inay U Mahad Celiyaan Keylor Navas” – Gool FM
(Bayern Munich) 02 Maajo 2018. Macalinka kooxda Bayern Munich Jupp Heynckes ayaa kulanka kadib dareenkiisa kaga warbixiyay saxaafad qaab ciyaareedkii ay kusoo bandhigeen kulankii ay Real Madrid ku buuqdeen garoonka Santaigo Bernabeu.
Kooxaha Real Madrid iyo Bayern Munich ayaa kulan aad u xiiso badan xalay kuwada qaatay caasimada Madrid ee dalka Spain wuxuuna kulanka kusoo idlaaday barbaro 2-2, taasoo u suura galisay Los Blancos inay u gudubto kulanka finalka, maadaama kulanka lugta hore ee ka dhacay Allianz Arena uu kusoo idlaaday 2-1 ay ku soo adkaatay kooxda reer Spai.
“Marka aad eegto labada lugood ee kulankan, waxaad arki kartaa in kooxdeena ay wanaagsaneed, kama walwalsani, laakiin waan ka niyad jabay”.
“Real Madrid iyo taageerayaashooda waa inay u mahad noqaan Keylor Navas, wuxuu qaatay kulan cajiib ah, wuxuuna inoo diidey inaan shabaqiisa gaarno, waxy wanaagsanaan lahayd hadii aan sidaas sameyn lahayn”.
“Waxaan hadiyad u ogolaanay Real Madrid isla bilawga qeybta labaad ee ciyaarta, balse, waxaan ku guuleysanay inaan xaalada ku adkeyno iyaga”.
“Dhowr xidigo ayaa inaga maqnaa hadana waan ciyaarnay, waxaan qaadanay qaab ciyaareed wanaagsan, maadaama kuwa diyaarka u ahaa kulankan ay si wanaagsan u ciyaareen”.
Xogta Guud ee Taariikhda Koobka Adduunka oo Kooban.....+SAWIRRO